Rano kefir | Nutri Diet
Kefir dia sakafo tena mahasalama, nefa miaraka amin'izay dia sarotra ny mahazo manao azy rano kefir na ronono, ireo karazana kefir roa misy.
Kefir dia manana toetra probiotic Tena mahaliana ho an'ny zavamananaina, mila famelabelaran-kanto ary ny fanarahana torolàlana sasany hahazoana manao kefir rano.
Ny kefir rano, toy ny kefir ronono, dia manana microflora mitovy. Amin'ity tranga ity dia mora kokoa ny manao ny kefir rano satria tsy mila ronono manta hanaovana azy ianao.
1 Kefir rano
2 Ahoana ny fanaovana kefir rano
2.1 Fitaovana hanomanana azy
2.2 Ilaina ny akora ilaina
2.3 Fanomanana, tsikelikely
3 Toetran'ny kefir rano
Raha mijaly matetika amin'ny olana ara-pahasalamana amin'ny gastrointestinal ianao dia afaka manamboatra kefir rano hikarakarana ny fahasalamanao ary hijanona ho matanjaka, ho fanampin'izay, ny fanomanana rano kefir ao an-trano dia tsotra, mila mahazo ilay probiotics hahafahanao mankafy an'io rano mitoby io.
Mba hanaovana kefir rano dia mila ny voa kefir, hanao fisotroana miorina amin'ny rano. Ireo voa dia feno fonosana probiotika, zavamiaina bitika bitika avo lenta izay miara-monina amin'ny tontolo iainana. Ireo bakteria ireo dia afaka manampy antsika hijanona ho salama sy hanana fiarovana matanjaka kokoa.
Ireny probiotika ireny, dia bakteria tsara hita ao amin'ny rafi-pandevonan-kaninaIlaina izy ireo amin'ny fandevonan-kanina sy ny otrikaina hiditra ao amin'ny lalan-drantsika, ho fiarovana antsika amin'ny aretina.
Voaro ny hery fiarovan'ny vatana ary mahazo tanjaka bebe kokoa, raha mahatsiaro ho malemy isika, tsy mahay mandany sakafo, maloiloy na manana olana rehefa mandeha amin'ny serivisy, manamarika ary mianara manao Water kefira hihazona anao ho salama sy malama kokoa. Ankoatr'izay, hitazomana sakafo voalanjalanja ary manao fanatanjahan-tena tsy tapaka.
Ahoana ny fanaovana kefir rano
Ny fanomanana an'io fisotroana io dia tsotra, haingana ary manome valiny tena tsara. Mila fotoana fitsaharana sy fanamasinana manodidina fotsiny izany Ora 48.
Fitaovana hanomanana azy
Tavoahangy vera misy 1 litatra.
Sotro hazo na plastika hanaitra.
Lamba madio, lamba famaohana, na sivana kafe handrakofana ny karaoty.
Fehin-kibo mba hikambana amin'ireo sivana amin'ny siny misy rano.
Saringan plastika hanala ireo potipoti-bary avy amin'ny rano.
Ilaina ny akora ilaina
Voan'ny Kefir hydrated.
Siramamy volontany antsasaky ny kaopy.
Ataovy anaty siny fitaratra ny siramamy. Manampia rano mafana antsasaky ny kaopy ary afangaro mandra-pahafatin'ny siramamy tanteraka. Avy eo, ampio rano maripana miisa 3 kaopy, eo anelanelan'ny 20 sy 29 degre.
Ampio ny voan-kefir voahosotra ary sarony ny tavoara miaraka amin'ny sivana kafe na amin'ny lamba famaohana. Zava-dehibe ity dingana ity satria ny fermentation dia mamokatra entona ary ilaina ny lamba misy poria mba handosiran'ny gasikara soa aman-tsara. Avelao amin'ny toerana azo antoka ny siny ary avelao hipetraka mandritra ny roa andro.
Rehefa vita ny masirasira, dia saraho ny voam-bary rano kefir ary ampio amin'ny siramamy vaovao misy siramamy vaovao. Ho vonona ny hihinana ilay zava-pisotro.
Toetran'ny kefir rano
Ity zava-pisotro avy amin'ny rano ity dia manana fananana manan-danja izay manampy antsika hanana fahasalamana. Manaraka izany dia lazainay aminao hoe inona ireo tombontsoa entin'io fisotroana io aminay, mba hanapahanao hevitra indray andro any hanao izany any an-trano dia ho hitanao fa ho salama kokoa ny vatanao.
Mitazona a rafitra digestive salama.
Mahatsiaro ho tsara isika.
Manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny flora fandevonan-kanina.
Manankarena otrikaina toy ny baolina kitra, vitamina B12, manezioma ary asidra folika.
Ampitomboy ny fiarovana.
Mitazona a hery fanefitra matanjaka sy salama.
Kefir dia miady amin'ny bakteria ratsy ao amin'ny tsinainy.
Miasa ho toy ny bakteria.
Manampy amin'ny fandevonan-kanina lactose. Ampitomboy ny fandeferantsika amin'ny vokatra vita amin'ny ronono raha tsy zakanay.
Mampihena ny fanafihana avy amin'ny asma sy ny mahazaka fanehoan-kevitra.
Manatsara ny soritr'aretin'ny soritr'aretin'ny tsinay.
Miady amin'ny fitohanana indraindray.
Hatsarao ny Dingana fandevonan-kanina.
Ampitomboy ny fahasalamana amin'ny taolana noho ny atiny avo lenta ao kalsioma.
Mampihena ny asan'ny sela miteraka kansera.
Manakana ny fisehoan'ny Homamiadana.
ny voa do kefir Nampiasaina nandritra ny taona maro izy ireo mba hitandrina ny vatana sy ny zavamananaina ho salama. Ny asan'ny probiotics manampy antsika hahatsapa fahafinaretana izy ireo. Araka ny efa hitanao, ny fanomanana an'io fisotroana io dia tena tsotra, tsy maintsy mahazo ny voan-kefir fotsiny isika ary avelao izy ireo hanondrika anaty rano.
Azonao atao ny manomana ny fisotroana im-betsaka araka izay itiavanao azy, raha mahatsapa somary kamo ianao ary tsy mahay mandevona mandritra ny vanim-potoana iray dia azonao atao ny misafidy ny hanao an'io zava-pisotro io na handany ireo vokatra toy ny kefir yaorta na ronono kefir izay hitantsika ihany koa fivarotana lehibe.
Aza misalasala ary manomboka mihinana rano kefir an-trano anio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Kefir rano